သင်ပျင်းလာသောအခါအတွက် PC ဂိမ်းများ - VidaBytes | LifeBytes
ပျင်းနေချိန်အတွက် PC ဂိမ်းများ
Iris Gamen | 05/05/2022 22:21 | PC ဂိမ်းများ
ဒီနေ့ ဒီ Post လေးမှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် သင်ငြီးငွေ့နေချိန်အတွက် အကောင်းဆုံး PC ဂိမ်းအချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည့်စာရင်းတွင် ဖော်ပြပါ။. Epic Games Store သို့မဟုတ် Humble Bundle ဟုလူသိများသော ပလပ်ဖောင်းများသည် ချိုသာသောလျှော့စျေးများအပြင် အခမဲ့ဂိမ်းအမျိုးမျိုးကို သင်ရှာတွေ့နိုင်သည့် ကောင်းမွန်သောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းဂိမ်းများ၊ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဖျော်ဖြေရန် ပြီးပြည့်စုံသော နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပျင်းတဲ့အခါ ပျော်ရွှင်စရာနည်းလမ်းနဲ့ အချိန်ဖြုန်းချင်ကြတယ်။ ၎င်းတို့သည် စွဲလမ်းစေသောဂိမ်းများဖြစ်ပြီး အများစုတွင် သင်သည် စာရင်းသွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။
ငါတို့အမြဲပြောသလိုပဲ၊ အဲဒီလို နို့ဆီစာရင်းလုပ်ပါ။ မတူညီသောဝဘ်ပေါ်တယ်များတွင် တည်ရှိပြီး မတူညီသောဂိမ်းများစွာရှိသည်။ ၎င်းသည် ရှုပ်ထွေးသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ပြီးတော့ သူတို့တစ်ခုစီတိုင်းကို သင်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ သင်ထင်မြင်မိတဲ့ အရာတစ်ခုကို လွဲချော်မှာ အသေအချာပါပဲ၊ ငါတို့က mea culpa ကို သီဆိုပါတယ်။
1 လူတိုင်းသိထားသင့်သော PC ဂိမ်းများ
1.1 Legends ၏လိဂ်
1.4 ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲ ၃ ဓမ္မရာဇဝင်
1.5 ထာဝရအ Doom
1.9 တစ်ဦးကကောင်းမွန်သော snowman Build ရန်ခက်သည်
1.12 Dune Spice Wars
လူတိုင်းသိထားသင့်သော PC ဂိမ်းများ
နောက်လာပြမယ့် ဒီစာရင်းမှာ j ကိုတွေ့လိမ့်မယ်။ဂိမ်းများကို အခမဲ့နှင့် အခပေးဗားရှင်းနှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။
ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခု၊ PC multiplayer အမျိုးအစားအတွက် ရနိုင်ပါသည်။ Microsoft နှင့် OS X နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ကွန်ဆိုးလ်များအတွက် Riot Games မှ ထုတ်လုပ်သည်။
ဂိမ်း ပြေးနေသောဂိမ်းမုဒ်သုံးမျိုးပါရှိသည်။၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုမှာ The Summoning Rift ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ချက်မှာ Howling Abyss နှင့် နောက်ဆုံးတွင် Teamfight Tactics ဖြစ်သည်။ ဤဂိမ်းကို အသုံးပြုသူများသည် နာရီပေါင်းများစွာ ကြာရှည်ခံနိုင်သော်လည်း ၁၅ မိနစ် သို့မဟုတ် မိနစ် ၂၀ ကြားရှိသော ဂိမ်းများတွင် အုပ်စုဖွဲ့၍ ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။
ယခင်ကိစ္စကဲ့သို့ပင်၊ အများအပြားကစားသူအွန်လိုင်းတိုက်ပွဲ Arena ဂိမ်း. ဤဂိမ်းသည် Battle.net စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် ငါးခုနှင့် ငါးခုပါ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့် တိုက်ခိုက်ရေးမုဒ်ကို အခြေခံထားသည်။
ကစားသမားများ သူတို့ရဲ့ ဟီးရိုးအတွက် မတူညီတဲ့ အခန်းကဏ္ဍငါးခုကနေ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။တစ်ယောက်ချင်းစီမှာ မတူညီတဲ့ အရည်အချင်းတွေနဲ့ အားနည်းချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သူများ၊ တိုက်ခိုက်ရေးသမားများ၊ သူရဲကောင်းများကို အားပေးကူညီသူများ၊ Malfurion ကဲ့သို့ ကုသပေးသူများ သို့မဟုတ် တင့်ကားများအကြား ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကတစ် ဦး အကြောင်းပြောနေတာနေကြသည် ထွက်လာပြီးနောက် အလွန်ရေပန်းစားလာခဲ့သည့် ကတ်ဂိမ်း Blizzard Entertainment မှထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည် အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း သင့်အား အခကြေးငွေဖြင့် ကတ်စုဆောင်းမှုများနှင့် အပိုအကြောင်းအရာများကို ရယူနိုင်ခြေကို ပေးဆောင်သည်။
ဂိမ်းသည် တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး ဆော့ကစားနိုင်သည်။ မတူညီသောဂိမ်းမုဒ်များကိုရွေးချယ်ပြီး ၎င်းတို့တစ်ခုစီသည် မတူညီသောအတွေ့အကြုံများကို ပေးဆောင်သည်။. မတူညီသော Warcraft စကြာဝဠာနှင့် အတန်းအစားကို ကိုယ်စားပြုသည့် ကတ်ဂိမ်းတွင် ဇာတ်ကောင် ၁၀ ကောင်ရှိသည်။
ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲ ၃ ဓမ္မရာဇဝင်
ဤအွန်လိုင်းဂိမ်းကို ဗျူဟာဂိမ်းအဖြစ် 2020 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် စတင်ခဲ့သည်။ Crusader King3တွင်သင်သုံးစွဲလိမ့်မည်။ စာဖတ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းနှင့် သင်၏အရင်းအမြစ်များကို စီမံခန့်ခွဲရန် အချိန်များစွာပေးသည်။ ဘုရင်ဖြစ်ဖို့။
ခုနကပြောသလိုပဲ၊ ငါတို့က ထီးနန်းတက်ဖို့ ငါတို့ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့သူတွေ၊ တရားရုံး၏ လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလည်း ချုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ပြီး သွေးဆောင်ဖြားယောင်းခြင်းတွေကို ဘယ်မှာ လုပ်နိုင်မလဲ။
ဒီနေရာမှာတော့ ကျနော်တို့က ယူလာပေးတယ်။ ပထမဆုံးလူသေနတ်ပစ်ဂိမ်း 2020 တွင်ထွက်ရှိခဲ့သည်။ FPS ကြိုက်နှစ်သက်သောအသုံးပြုသူများသည် ဤဂိမ်းကို သိပြီးကစားခြင်းကို ရပ်တန့်၍မရပါ။ ၎င်းသည် 2016 ၏ယခင်ဗားရှင်းကို ပိုမိုထူးခြားစေမည့် နောက်ဆက်တွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
Doom Eternal ကို သင်စကစားသောအခါ ၎င်းကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဒီဇိုင်းနှင့် အသံအရည်အသွေးသည် ရိုးရှင်းပါသည်။. အက်ရှင်နှင့် ပထမဆုံးလူသေနတ်ပစ် ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင်သည် နတ်ဆိုးများကို တိုက်ခိုက်မည့် ရှေးစစ်သည်တစ်ဦး၏ အခန်းကဏ္ဍကို ရယူမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် MMO တစ်ခုဖြစ်သည်။ အများအပြားကစားသူအများအပြား အက်ရှင်-ရှင်သန်မှု ဗီဒီယိုဂိမ်း ပွင့်လင်းကမ္ဘာထဲမှာ။ ဂိမ်းသည် ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားပြီးနောက် အမေရိကတွင် လက်နက်များ၊ အစားအစာ၊ ကားများ စသည်တို့အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသော ရောဂါပိုးရှိသော ဇာတ်ကောင်များနှင့် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများ နေထိုင်သည့် ဂိမ်းဖြစ်သည်။
ဒီဂိမ်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ရှင်သန်ရန် အရင်းအမြစ်များစွာကို စုဆောင်းပါ။ ကမ္ဘာမှာ နောက်တစ်ရက် အိမ်များ၊ အဆောက်အအုံများကို စူးစမ်းလေ့လာရန်၊ ရောဂါပိုးကို သတ်ပစ်ရန်၊ အန္တရာယ်ရှိသော အခြေအနေများအပြင် လှပသော အရာများကို ဖြတ်သန်းရမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကိုလိုနီဖွဲ့စည်းရန် အွန်လိုင်းတွင် အခြားသော အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများနှင့် ပူးပေါင်းပါ။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ဗျူဟာ၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဂိမ်းအသုံးပြုသူများသည် တိုက်ပွဲအတွက် ၎င်းတို့၏ အကောင်းဆုံးတပ်သားသစ်များကို လေ့ကျင့်သင်ကြားရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်စခန်းကို တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် မြို့များတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် ဇာတ်ကောင်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် တစ်ချိန်တည်းတွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ တိုက်ပွဲအနိုင်ရရန် ရေရှည်မဟာဗျူဟာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။
ဤဗီဒီယိုဂိမ်းအကြောင်းကို အွန်လိုင်းတွင် ကြားဖူး သို့မဟုတ် မြင်ဖူးသူတိုင်းသည် Zelda ဗီဒီယိုဂိမ်းစတိုင်နှင့် တိုက်ဆိုင်မှုရှိသည်ကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ မြေခွေးလေးသည် ဤအက်ရှင်နှင့် စွန့်စားခန်းဗီဒီယိုဂိမ်း၏ ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်။ ပဟေဠိများနှင့် ပလက်ဖောင်းများကဲ့သို့သော စိန်ခေါ်မှုများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို တင်ပြထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မှောင်မိုက်အပျက်အစီးများ ပြည့်နှက်နေသော သဲကန္တာရကမ္ဘာကြီးကို ဖြတ်သန်းသွားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤမြေများတွင် ရှိနေသည့် သတ္တဝါများကို တိုက်ခိုက်ကာ နောက်ဆုံးသူဌေးများနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤဂိမ်း၏ ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးသည် အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး အမျိုးမျိုးသော အသံများနှင့် တည်နေရာများကို ပြသထားသည်။
တစ်ဦးကကောင်းမွန်သော snowman Build ရန်ခက်သည်
ဖေဖော်ဝါရီ 2015 တွင် စတင်ခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းပဟေဠိဂိမ်း ၎င်းကို Alan Hazelden နှင့် Benjamin Davis တို့က ဖန်တီးခဲ့သည်။ ကနဦးတွင် ၎င်းကို ကွန်ပျူတာများနှင့် မိုဘိုင်းလ်စက်ပစ္စည်းများအတွက် ဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ် ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
ဇယားကွက်ပေါ်တွင် အခြေခံထားသော ဂိမ်း ဘီလူးတစ်ကောင်ကို နှင်းလူသားများတည်ဆောက်ရာတွင် ကူညီရန် ကစားသမားတစ်ဦးစီကို တာဝန်ပေးသည်။. Snowmen တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် မလွယ်ကူသောကြောင့် ကစားသမားအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှင်းတွေ များများဆောက်လေ အခန်းတွေ သော့ဖွင့်လေပါ။
နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဂိမ်း ပဟေဠိအမျိုးအစားနှင့်သက်ဆိုင်သည်။. ဤဗီဒီယိုဂိမ်းတွင် ကစားနေသူသည် နံပါတ်များပါ၀င်သည့် အကွက်များကို လျှောလိုက်မည်ဖြစ်ပြီး အမှတ်များထည့်ခြင်းဖြင့် တတ်နိုင်သမျှကြာရှည်အောင် ထိန်းထားရမည်ဖြစ်သည်။
ပလေယာသည် ဤအကွက်များကို လေးခုခွဲ၍ လေးခုခွဲ၍ ပေါင်းထည့်ခြင်းနှင့် XNUMX ၏မြှောက်ခြင်းကို ပေါင်းစည်းမည်ဖြစ်သည်။ ဖန်သားပြင်အသစ်တစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စရိုက်တစ်ခုရှိသည်။ နှင့် နံပါတ်အကွက်များ အမျိုးအစားအသစ်များကို ထည့်သွင်းထားသည်။ သင်စကစားပြီး နာရီပေါင်းများစွာကြာအောင် ကစားပြီးတာနဲ့ သင်နားလည်နိုင်မယ့်ဂိမ်းတစ်ခုပါ။
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်နှစ်က ဤပထမလူအက်ရှင်ဗီဒီယိုဂိမ်းသည် အလွန် ဆိုက်ဘာပန့်ခ်အနာဂတ်အတွက် အနာဂတ်တွင် ပေါ်လာခဲ့သည်။ သင်သည် ဆိုက်ဘာစစ်သည်တော်တစ်ဦးဖြစ်သကဲ့သို့ သင့်အသားအရည်တွင် သင်ခံစားရလိမ့်မည်။ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ခြိမ်းခြောက်မှုများကို သင်တိုက်ဖျက်မည့်နေရာ။
Jack သည် ရန်သူများကို တိုက်ခိုက်ရုံသာမက ၎င်း၏ လှုပ်ရှားမှုစွမ်းရည်အားလုံးကို အသုံးချရမည့် အန္တရာယ်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်များကို ဖြတ်သန်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်းကို ဖြတ်ကျော်လာသည်နှင့်အမျှ ဇာတ်ကောင်အတွက် စွမ်းရည်အသစ်များနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်မှုများကို လော့ခ်ဖွင့်ပေးပါမည်။
အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဗျူဟာသည် ဤဗီဒီယိုဂိမ်းက သင့်ကို ပေးဆောင်သည်။ ငါတို့ပြောနေတာက တော်လှန်တဲ့ Dune စကြာဝဠာထဲမှာ တည်ရှိနေတာ။ ကစားသမားများအနေဖြင့် သင်၏အဖွဲ့ခွဲကို ဦးဆောင်ကာ Arrakis ဂြိုဟ်ကို ချုပ်ကိုင်လွှမ်းမိုးနိုင်စေရန် တိုက်ခိုက်ခြင်း၏ စိန်ခေါ်မှုကို သင်တင်ပြထားသည်။
ဂိမ်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါသည် အသက်ရှည်စေနိုင်တဲ့ အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကို ရယူပါ။ ရှိသူများ၏။ မင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကို တွန်းလှန်ပြီး မင်းပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ မင်းဘယ်ဘက်ကိုဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရလိမ့်မယ်။
ဒါတွေကတော့ အွန်လိုင်းဂိမ်းချစ်သူတိုင်း သိသင့်တယ်ထင်တဲ့ အကောင်းဆုံး PC ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေပါ။ ဤဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုထက်ပိုသော ဂိမ်းတစ်ခုကို သင်စတင်နိုင်ပြီး ၎င်း၏သမိုင်းကြောင်းကြောင့်သာမက ၎င်း၏ဂရပ်ဖစ်ကြောင့်လည်း ချိတ်ဆက်မိသွားဖွယ်ရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - LifeBytes » PC ဂိမ်းများ » ပျင်းနေချိန်အတွက် PC ဂိမ်းများ
FLAC ဂီတ- အဓိပ္ပါယ်နှင့် လက္ခဏာများ